एसईओ-मैत्री यूआरएल संरचना को लागी Semalt बाट परम मार्गदर्शक
गुगलका लागि उत्तम यूआरएल क्राफ्टिंग अर्को हडल हो तपाईंले हराउनुपर्नेछ यदि तपाईं आफ्नो ब्रान्ड वा प्रकाशन सुधार गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। आज, त्यहाँ धेरै यूआरएलहरू छन्, जुन केवल वेबपृष्ठहरूमा ठेगानाहरू हुन्। यी वेबपृष्ठहरू र उनीहरूको जिम्मेवार SEO पेशेवर अझै बुझ्न सकेका छैनन् कि URLs SEO का लागि संरचित छन्।
दुःखको कुरा, अन्य एसईओ तत्वहरू जस्तै शीर्षक र हेडिंग प्राय: बढी महत्त्वपूर्णको रूपमा व्यवहार गरिन्छ, तर अन्जानमा, यूआरएलहरू एसईओ सफलता प्राप्त गर्नका लागि एक शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ। हामी कसरी देखाउँछौं कि हामी SEO मैत्री URL हरू कसरी सिर्जना गर्छौं।
के यूआरएलमा वर्गीकरणका लागि कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ?
धेरै चोटि, यो विषय यस परिचय पछि हामीले प्राप्त गर्ने पहिलो प्रश्न हो। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ कुनै स्पष्ट उत्तर छैन कि URL मा कुञ्जी शब्दहरूले यसको स्तरमा मद्दत गर्दछ, र यहाँ किन हो:
२०१०: URL मा कुञ्जी शब्द एक प्रयोगकर्ताको रूपमा सम्पर्क गरिएको थियो
यहाँ हामी भन्न खोजेको कुरा हो, २०१० मा गुगलको म्याट कट्सले फाइलनाममा मार्गनाममा कुञ्जी शव्दहरूमा कुञ्जी शव्दहरू छलफल गर्ने भिडियो प्रकाशित गर्‍यो।
र बहु-हाइफन फाइलनाम निम्नको रूपमा:
यसको साथ, कट्सले सुझाव दिन्छ कि हामी समस्याको दृष्टिकोणबाट प्रयोगकर्तालाई कुन कुरा रुचाउँछौं। उनले थप वर्णन गरे कि बहु-हाइफन फाइलनाम प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई स्प्यामको रूपमा महसुस गर्न सक्दछन्। त्यसपछि उनले पुष्टि गर्दछ कि मल्टि हाइफनहरूको लागि कुनै एल्गोरिथ्म छैन जुन बहु हाइफनहरूको साथ वेबपेजहरूलाई दण्डित गर्नको लागि जिम्मेवार छ। त्यो भनिरहेको साथ, यस विधिको प्राथमिक असंतोष योमा देखा पर्दछ कि यसलाई कसरी प्रयोगकर्ताले देख्दछन्।
कट्स, उसको भिडियोमा, स his्केत गर्दछ कि उसको एक कथनमा प्रयोगकर्ता प्रभाव प्रभाव छ। उनले वर्णन गरे कि जहाँसम्म खोज इञ्जिन (गुगलको) रैंकिंगको सवाल छ, त्यहाँ दुई यूआरएल संरचना मोडेलहरू बीच कुनै ठूलो भिन्नता छैन। उहाँ अगाडि जानुहुन्छ र सुझाव दिनुहुन्छ कि हामी बढी होशियार हुनुपर्छ किनकि जब हामीसँग लामो फाईल नाम हुन्छन् जुन हाइफनले भरिएको हुन्छ भने प्रयोगकर्ताले अनुभव गर्न थाल्छ। सामान्यतया, व्यक्तिहरू ड्यास, ड्यास, ड्यास, ड्यास, ड्यास, ड्यास, ड्यास देख्न मन पराउँदैन; तिनीहरू यस्तो लिंक क्लिक गर्न को लागी पनि छनौट गर्न सक्दछन्।
यद्यपि, हामीले युआरएल संरचनाको रैंकिंग कारक पहलूको बारेमा कत्ति नयाँ कुरा सिक्यौं। यो जानाजानी हुन सक्छ किनकि ऊ पूर्णतया प्रयोगकर्ताको अनुभवमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहान्छ किनकि उसले महसुस गर्‍यो कि यो कुनै पनि अन्य क्रमबद्ध कारक-सम्बन्धित लाभ भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
२०११: डोमेनमा कुञ्जी शब्दहरू छन् र्यान् factor् गुणांक?
२०११ मा, त्यहाँ अर्को भिडियो थियो जुन धेरै SEO विशेषज्ञहरूले प्रशंसा गरे किनभने यसले डोमेनमा कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा केही प्रकाश दिन्छ। यो भिडियोमा म्याटले भनेका छ कि गुगलले डोमेनमा कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोगलाई प्रभाव पार्ने कुरामा विचार गरिरहेको छ। तपाईको यूआरएलमा कुञ्जी शब्दहरू राखेको जस्तै, डोमेनमा कुञ्जी शब्दहरूले वेबसाइटको स्तरलाई प्रभाव पार्दछ। तर तिनीहरूको प्रभाव र महत्त्वको खण्डन गरियो।
म्याट श्रेणीकरण कारक भूमिका कम प्रदर्शन गर्दछ र सुझाव दिन्छ कि यो केवल प्रयोगकर्ता को अनुभव र मार्केटिंग को प्रभाव।
२०१ 2016: गुगलले भन्दछ कि कीवर्डले श्रेणीकरणको मामिलामा एकदम थोरै योगदान गर्दछ
जनवरी २०१ 2016 मा, त्यहाँ एक वेबमास्टर सेन्ट्रल ह्याoutआउट थियो जहाँ जोन म्यूलरले स्वीकार गरे कि यूआरएलमा कुञ्जी शब्द राख्नु एक क्रमबद्ध कारक थियो। यद्यपि उनले यसलाई क्रमबद्ध कारकको रूपमा महत्त्व घटाए र भने कि यसको प्रभाव थोरै थियो। ह्याoutआउटमा, मुउलरले भने कि उनी विश्वास गर्छन् कि यो एकदम सानो रैंकिंग कारक हो, र यो पर्याप्त महत्त्वको छैन कि उसले यसलाई जबरजस्ती गर्नेछ। उनले यो पनि उल्लेख गरे कि किवर्डलाई फिट गर्नको लागि तपाईको यूआरएलको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक परिश्रमको लाग्दैन।
उसले यसलाई "धेरै सानो" भनिरहेको छ म्याटले के भनेका थिए। यो स्पष्ट भयो कि त्यहाँ अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन् जुन यूआरएल कुञ्जीमा फ्याँकिएको ध्यान चाहिन्छ, जुन धेरै फाइदाजनक छैन।
२०१:: URL मा कुञ्जी शब्दहरूको प्रभाव ओभररेट गरियो
म्यूएलर यूआरएलमा स्तर निर्धारण कारकको रूपमा कति नगण्य कुञ्जी शव्दहरूको स्पष्टीकरणमा गए। २०१ 2017 मा, उनले उनीहरूलाई ओभररेटको रूपमा संदर्भित गरे। उनले बुझाउँछन् कि गुगल एसईओको सन्दर्भमा यूआरएलमा कुञ्जी शब्द ओभरराइट हुन्छन्। यूआरएलहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन डिजाइन गरिएको हो।
२०१:: तपाईको एसईओमा कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्
२०१ 2018 मा, म्यूएलरले यूआरएलका कुञ्जीशब्दहरूमा आफ्नो भयानक आक्रमण जारी राख्यो, स्पष्ट रूपमा यो दर्ता गर्‍यो कि यो एक रैंकिंग कारक होइन। यस पटक उनले अगाडि गए र औंल्याए कि कसरी प्रयोगकर्ताहरूले मुश्किलले यूआरएल संरचनाहरू ध्यान दिए। यूआरएलमा कुञ्जी शब्द एक श्रेणीकरण कारक हुन सक्छ तर एक माइनर। मानौं हामी यो तपाईको यूआरएलमा मात्र महत्वपूर्ण छ ताकि तपाईलाई दण्डित नहोस् र होइन किनकि यसले श्रेणी निर्धारणको लागि कुनै अ points्क बनाउँछ।
के यूआरएल लिंकमा कुञ्जी शब्दहरू ए an्कर पाठको रूपमा प्रयोग गरिएको छ?
यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो जुन हामी यस शीर्षकसँग काम गर्ने बेलामा पाउँछौं। त्यहाँ चारै तिर उडान अवधारणा रहेको छ कि यदि कसैले अर्को लिंकमा केवल लिंकको साथ लिंक गर्दछ भने, गुगलले URL कीवर्डहरू एन्कर पाठको रूपमा प्रयोग गर्दछ। उनीहरूको विश्वास छ कि त्यसो गर्दा साइटले त्यो एch्कर पाठको लागि राम्रो दर्जा दिन्छ। यस प्रकारको लिंकलाई हामी ना we्गो लिंक भन्छौं।
यसलाई त्यो नाम प्राप्त भयो किनकि यो एउटा लंगर पाठमा लुकाउनुको सट्टामा URL को रूपमा हो। हो, हामी जान्दछौं कि तपाईं यहाँ बुझ्नुहुन्न, तर हामी तपाईंलाई के मतलब देखाउँदछौं।
ए an्कर पाठमा URL:
यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
ओह, यो हाम्रो मतलब हो।
मुइलरले भने कि नग्न लिंकहरूले कुनै पनि प्रकारको एन्कर पाठ जानकारी पास गर्दैन।
उहाँ के बुझ्नुहुन्छ भन्नेबाट, गुगलका प्रणालीहरूले ना naked्गो लिंकहरू पहिचान गर्न कोसिस गर्छन्, र त्यसपछि यो लिंक गरिएको यूआरएलको रूपमा वर्गीकरण गर्दछ। र यो होइन कि त्यहाँ ना valuable्गो लिंकमा कुनै मूल्यवान् एch्कर छ। Google लाई थाहा छ कि यो लिंक हो। जहाँसम्म, तिनीहरूले विशेष मा केहि को लागी लंगर को उपयोग गर्न सक्दैन।
युआरएलमा कुञ्जी शब्दहरूले SERP बाट क्लिकहरू बढाउँछन्?
यो अर्को प्रश्न हो जुन धेरै ग्राहकहरूलाई चिन्तित गर्दछ। त्यहाँ पुरानो एसईओ विचार छ जुन तपाईंको यूआरएलमा कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नाले SERPs बाट उच्च CTR उत्तेजित गर्न मद्दत गर्दछ। जबकि यो विगतमा सत्य भएको हुन सक्छ, यो पक्कै अहिले त्यस्तो छैन। वाक्यांश गर्न उत्तम तरिका जुन कम सत्य हुन्छ। विशेष रूपमा साइटहरूको लागि जसले ब्रेडक्रम्ब नेभिगेसन वा ब्रेडक्रम्ब नेभिगेसन संरचित डाटा प्रयोग गर्दछ। यसको साटोमा, गुगलले खोजी नतिजामा साइटहरूको लागि कोटी नाम प्रयोग गर्दछ जुन त्यस्ता साइटहरू प्रस्तुत गर्दछ।
स्पष्टसँग, यूआरएलमा कुञ्जी शब्दहरू देखिने छैनन्। साइटहरू जो ब्रेडक्रम्ब नेभिगेसन वा संरचित डाटामा निर्भर हुँदैन, गुगलले उनीहरूमा कुञ्जी शब्दहरूको साथ यूआरएलहरू प्रदर्शन गर्दछ, तर तिनीहरूलाई हाईलाइट गरिएको हुँदैन। केहीले विश्वास गर्दछ कि यदि गुगलले यूआरएल कुञ्जी शब्द हाईलाइट गर्नुपर्‍यो भने यसले प्रयोगकर्ताहरूको आँखा लिस्टि draw बनाउन मद्दत गर्दछ। तर त्यो सत्य होइन।
त्यहाँ युआरएलमा कुञ्जी शब्दहरू राख्नुमा कुनै विन्दु छ?
यसको सानो सम्भावित रैंकिंग कारक महत्त्वको अलावा, यसले तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरूको लागि यूआरएलमा कुञ्जी शब्द राख्नुका अन्य स्पष्ट फाइदाहरू पनि छन्। तपाईको यूआरएलमा कुञ्जी शब्द राख्नु प्रयोगकर्तालाई पृष्ठको बारेमा बुझ्न मद्दत गर्दछ। जे होस् किवर्डहरू सँधै SERP मा देखा पर्दैन, ती नग्न URL को रूपमा लि linked्क हुँदा तिनीहरू देखा पर्ने छन्।
जब श doubt्का लाग्छ, हामी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि हाम्रो ग्राहकको यूआरएल संरचना अनुकूलित गर्दछौं किनकि गुगलले सिफारिश गर्दछ कि हामी आफ्नो पावरमा प्रयोगकर्तालाई खुशी पार्न प्रत्येक चीज गर्छौं। यसले वेबपृष्ठहरूको प्रकारहरूको साथ पign्क्तिबद्ध गर्छ जुन गुगलको उच्च स्तर छ।
उत्तम URL संरचना सिर्जना गर्न हाम्रो गुप्त सूत्र
लोअरकेसमा युआरएल मानकीकरण गर्दै:
धेरै सर्वरहरू मिश्रित केसहरूमा यूआरएलहरू बुझ्न गाह्रो हुँदैन; यद्यपि यो टिपले यूआरएल जस्तो देखिन्छ। सामान्यतया भन्ने हो भने, हामी कम उदाहरणका URL हरूसँग परिचित छौं "" उदाहरण-डट-कम "को सट्टा" उदाहरण-डट-कॉम "।
हामी हाइफनहरू प्रयोग गर्छौं, अन्डरस्कोरहरू होइन
हामी हाइफन (-) प्रयोग गर्दैनौं र अन्डरस्कोरहरू (_) प्रयोग गर्दैनौं किनकि जब एउटा खाली लिंकको रूपमा प्रकाशित हुन्छ भने, अन्डरकोरहरू हेर्न गाह्रो हुन्छ।
कोटी URL संरचनामा सटीक कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्दै
एउटा साधारण गल्तीले कम नामको रूपमा कोटि नामको रूपमा प्रयोग गर्दै छ। यो गल्ती प्राय: सबै भन्दा ट्राफिक प्राप्त गर्ने कुञ्जी शब्द छनौटबाट उत्पन्न हुन्छ। कहिलेकाँही, सब भन्दा उच्च ट्राफिक कीवर्ड कोटिमा पृष्ठमा मुख्य फोकस हुँदैन।
यूआरएल संरचनामा अनावश्यक शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
कहिलेकाँही CMS ले URL संरचनामा शब्द वा कोटी थप्नेछ। त्यसो गर्नाले URL संरचना अवांछनीय बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, त्यहाँ/श्रेणी/विजेट/मा हुनुको कुनै मतलब छैन जब यो केवल एक विजेट हुनु पर्छ। त्यस्तै प्रकारले, यदि त्यहाँ एक विकल्प छ जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको साइटको सेक्सनबाट के अपेक्षा गर्ने भनेर बताउनको लागि उत्तम छ, तब त्यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
एसईओ मैत्री यूआरएल को शीर्षक एक शंका जो परे जान्छ। उत्तम विश्वास छ कि बारीक संग आउँछ। जबकि Google ले यसको SERP मा यूआरएलहरू नदेखाउने निर्णय गरेको छ, अन्य बढ्दो खोज इन्जिनहरू जस्तै बिंग र डक डकगो अझै पनि उनीहरूलाई यसको SERP मा देखा पर्न योग्य ठान्छन्। यो राम्रो कुरा हो कि सम्भावित आगन्तुकहरूलाई तपाईंको यूआरएल हेर्न दिनुहोस् किनकि यसले उनीहरूलाई पृष्ठको बारेमा के सिकाइरहेको छ।
अन्तमा, राम्रो URL संरचना भएकोले तपाइँको CTR हरूलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँको वेबपृष्ठमा SERP देखा पर्छ। तपाइँको यूआरएल छोटो राख्दा यसले अधिक उपयोगकर्ता मैत्री र प्रतिलिपि/साझेदारी गर्न सजिलो बनाउन पनि योगदान पुर्‍याउँछ। छोटो यूआरएलहरू अधिक प्राय: साझेदारी गरिन्छ, जसले पृष्ठको लोकप्रियता बढाउँदछ।
तलको रेखा तपाईको यूआरएल संरचना महत्वपूर्ण छ, र तपाईले यसको राम्रो ध्यान राख्नु पर्छ।
जे होस्, यदि तपाइँ एसईओ र वेबसाइट प्रमोशन को विषय को बारे मा अधिक जान्नु आवश्यक छ भने, हामी तपाइँलाई हाम्रो भ्रमणको लागि आमन्त्रित गर्दछौं Semalt ब्लग।